कोरोना महामारीको बिचमा विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुले एस्तो गर्ने गरेको खुलसा !! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना महामारीको बिचमा विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुले एस्तो गर्ने गरेको खुलसा !!
कोरोना महामारीको बिचमा विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुले एस्तो गर्ने गरेको खुलसा !!
सरकारले विदेशबाट आउनेका लागि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने प्रावधान बनाएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न देशभर ५७ वटा होटल तयारी अवस्थामा राखेको छ । यी होटलहरु दैनिक करिव ३३ सय जनालाई एकसाथ सेवा दिन तयारी अवस्थामा छन् । तर, अहिलेसम्म विदेशबाट फर्किएका १६ हजार ६ सय ७२ जना मध्ये १ हजार १ सय जना मात्रै होटलमा बसेको पाइएको छ ।
होटलहरुले आवश्यक पूर्वाधार तयार पारे पनि विदेशबाट फर्किएकाहरु सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न मिल्ने नीति बनाएसँगै उनीहरु होटलमा नबसेर होम क्वारेन्टाइनमा बस्न गएको होटल संघ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्यले बताए । विदेशबाट आएका मध्ये ७ प्रतिशत मात्रै होटल क्वारेन्टाइनमा बसेका र बाँकी ९३ प्रतिशत सबै होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन ।
खासगरी पीसीआर वा आरडीटी रिपोर्ट लिएर आएका यात्रुलाई सरकारले घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने सुविधा दिइएकाले पनि होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने यात्रुको सङख्या न्यून भएको छ । यसले गर्दा विदेशबाट उडान भन्दा एक दिन अघि होटल क्वारेन्टाइनको लागि बुकिङ गरेका प्राय यात्रु विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरमा पुगेपछि धमाधम घर फर्किने गरेको शाक्यको भनाइ छ ।
सरकारले अहिले पहिलो चरणमा खाडी मुलुक तथा कामको सिलसिलामा गएर दुःखमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकता दिएर घर फर्काइएको छ । त्यही कारणले होटलमा बस्नेहरुको संख्या न्युन भएको होटल व्यवसायीले अनुमान गरेका छन् ।
विदेशबाट आएकाहरुलाई सुरुमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिन्छ । त्यसपछि मात्र होटल क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने गरेको छ । तर, यता होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुले भने होटलमा बसेको खर्च आफैं बेहोर्नुपर्छ । खर्च बेहोर्न नसक्नेहरुलाई सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टाइनमा बस्ने सर्तमा पठाउने गरिएको छ ।
होटल व्यवसायी र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार विदेशबाट फर्केर होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्नेका लागि प्रतिव्यक्ति न्यूनतम दुई हजारदेखि अधिकतम ५५ सय रुपैयाँसम्म रकम तोकिएको छ । अधिकतम मूल्य चारतारे र न्यूनतम मूल्य पर्यटकीय स्तरका होटेलमा निर्धारित गरिएको छ । होटल क्वारेन्टाइनमा प्रयोग भएका होटल चार तारेदेखि पर्यटकस्तरीयसम्म रहेका छन् ।
कोरोना संक्रमित नेपालीलाई अमेरिकामा अस्पतालले भर्ना नलिएपछि कोठामै मृ.त्यु
नेकपा सचिवालय वैठक स्थगित
एटीएम मेसिन फोडेर चोर्न खोज्ने एकजना पक्राउ